Amniga Internetka Bisha Taxanaha Part One |
Amniga Internetka Bisha Taxanaha Part One
Iyadoo qayb ka ah internetka Bisha Amniga, waxaan halkan xarunta horumarinta ganacsiga yaryar, koonfurta laanta gobolka bartamaha, waxaa bixiya taxane afar qeyb ka mid ah talooyin todobaadle ah oo ay bixiyaan qof waayarag ah Security Computer kii fududayn doonaa mawduuca iyo muujiso sida aad naftaada iyo ganacsiga yaryar aad badbaadin kartaa.
Bill Tucek waxaa ku kalsoon tahay macluumaad taliyaha arrimaha ammaanka iyo Hogaamiyaha iyadoo in ka badan labaatan sano oo Information Management Security iyo La Tashiga leh waayo-aragnimo International dhowr warshado ay ka mid yihiin Telecom gudahood, daawooyinka ', Adeegyada maaliyadeed, Dowladda / Difaaca iyo Warshadaha. A Co-abuura, waayo, geedi socodka Security for Device Medical la macay US, wuxuu haystaa dhowr darajo Security iyo caddeyn oo ay ku jiraan Degree Master ah ee Security Information. Bill sidoo on board-talinta Governor ee Amniga Internetka for gobolka Indiana.
Sidaas Bill, u burburin hoos noo, waa maxay heshiiska weyn oo ku saabsan internetka iyo waa maxay saamaynta iman kara in ay ganacsi yar yar:
Waa arrin ku saabsan ilaalinta macluumaadka iyo nidaamyo waa muhiim adiga iyo ganacsiga si sidaa darteed waxaa jirta saamayn lahayn in ay hawlaha aad iyo aad faa'iidada. Macluumaadkaaga ganacsiga ayaa qiimaha, waxay noqon kartaa istiraatiiji ah ama waxay noqon kartaa qiimaha badeecadaha a ku xiran tahay nooca macluumaadka. In The gacmo khalad ah, macluumaadkaaga ku yeelan kartaa saameyn xun oo qaali ah in aad ganacsi. Soo koobid, waxa ay ku saabsan yareysey halisyo aan loo baahnayn in aad ganacsi.
Maxaad ula jeeddaan by qiimaha this, waayeen qof faa'iido ka macluumaadkayga ganacsi?
Absolutely, ganacsiga yar yar waxay leeyihiin wax badan oo qarsoodi ah warbixin - mararka shqsiga, ay ku jiraan macluumaad ku saabsan macaamiisha, qorshaha ganacsiga, xisaabinta iyo xogta dhaqaale, macluumaadka shaqsiga xasaasi ah.
Tusaale ahaan, haddii aad tahay iibka ah ama suuq-xirfadeed oo ay leeyihiin qorshe faahfaahsan oo ku saabsan ballaarinta suuqa mustaqbalka ama line a soo saarka cusub, this hubaal noqon lahaa qiimaha istiraatiiji ah in tartamaya. Waa maxay noqon lahaa kharashka haddii aad ayaa la jabsaday iyo tartamaya macluumaadkan helay iyo realigned istiraatiijiyad ganacsi ka hor inta aadan fulin karo?
Aan niraahno iibka ama suuq-xirfadeed this isla sidoo kale liiska macmiilka ee macaamiisha bixinta wanaagsan ah oo ay la socdaan tirada credit card iyo macluumaadkan la xado. Macluumaadkan waxaa uu qiimo badeecadaha sida fudud loo kala gato suuqyada dhulka hoostiisa, waayo, beddelidda, si ay lacag caddaan ah ama u dhigma.
Sidoo kale waxaa jira qiime aad awooda kaliya ay awoodaan si ay u helaan macluumaad adiga kuu gaar ah aka helitaanka. Tusaale ahaan, qiyaasi haddii maalin keliya aad u tagto si ay u aqbalaan lacag ka macaamiisha ah oo aan awoodin in ay sidaa sameeyaan sida aad computer xiran yahay oo dalbanaya in aad bixiso madax furasho ah. awoodda aad u leedahay in ay helaan nidaam adiga kuu gaar ah uu qiimo weyn ku ganacsigaaga.
Waa maxay a tallaabada ugu horeysay wanaagsan halkan ganacsi yar?
My talo koowaad waa in la ogaado waxa macluumaadka ugu qiimaha badan in aad ganacsi iyo meesha ay tahay; kaliya ogayn wixii macluumaad waa tallaabo weyn oo ugu horreeya. labaad, waa fahamka haddii ay jiraan wax shuruudaha sharci macluumaadka ganacsigaaga heysta. Tusaale ahaan xirfadlayaasha badan oo caafimaad sida Dhakhaatiirta iyo ilkaha ayaa looga baahan yahay oo ku saabsan diiwaanada caafimaad ee bukaanka. Kol haddii aan qorshe ku saabsan sida aad doonaysid in aad siddo iyo ilaalinta macluumaadka waxaa muhiim ah in aad ganacsi.
Tallaabada saddexaad waa sida macluumaadka in la adeegsadaa iyada kaydiyaa iyo maamulo. From indhaynta ganacsiyada yar yar oo badan oo aan, gaar ahaan GOORMUU, waxay leeyihiin macluumaad meelo badan ama isku qasan macluumaadka shakhsiyeed. dadka ganacsatada yar yar ka faa'iideysan lahaa by kala ganacsiga ka macluumaadka shakhsiga ah in la xadido weerarada ka iman kara faafidda waa in ay dhacaan.
Tusaale ahaan, Milkiilaha ganacsi yar yar ayaa waxa u diiwaangashan xisaabaadka ganacsi on computer shakhsi kaas oo sidoo kale loo isticmaalaa Raalli ahaanshaha. Milkiilaha gamer aad u xiiseeya, downloads kulan "free" ka internet ee shakhsi isticmaalka shaqada ka dib. Tusaalahaan caadi ah, kulan ay ku jiraan furin taasi oo markii dambe tirtirto diiwaanka qofka macaamilka ee xisabta lacagta taas oo uu leeyahay saameyn toos ah ku awood milkiilaha ganacsiga ee ay u ururiyaan receivables leh saameyn toos ah in line hoose.
Waxaad na siiyaa tusaalooyin iyo talooyin wanaagsan qaar ka mid ah, waxa kale oo aan samayn karo ilaaliyo macluumaadkayga ganacsi?
Next, la timaado qorshe ah sida aad u socotaan si ay u ilaaliyaan macluumaadka this. Waayo, milkiilayaasha ganacsiga qaar ka mid ah tani waa mid aad u fudud oo dadaal qiimo jaban. Waxaanu ka wada hadli doonaan todobaadka soo socda s dood.
aad aynnu karaa waxa aan maanta halkan ku bartay?
Ogow waxa macluumaad muhiim u tahay inaad ganacsigaaga iyo qiimaha lahay ah.
Fahmaan oo shuruudaha sharciyeed xogta aad maamuli.
Loo yaqaan halkaas oo warbixin ganacsi waxa lagu kaydiyaa.
Yaree isku qasin isticmaalka shakhsi on kombiyuutarada loogu tala galay ganacsiga.
Fahamka waxyaabaha aasaasiga ah ee Ammaanka warbixin Hay yihiin, Integrity iyo Helitaanka.
Ku bilow tallaabooyinka si loo sameeyo qorshe fudud oo ku saabsan sida aad u socotaan si ay u maareeyaan iyo ilaalinta macluumaadka ganacsi.
Xuquuqda daabacaadu way xifdisan, shaqada koobigeyda by William Tucek. taariikhda Diiwaangelinta: October 01, 2017 – 12:50 PM , tirada copyright: IBGH-ATPD-OKMS-ENOM
Entry waxa loo posted on Wednesday, Oktoobar 4-teedii, 2017 at 2:08 pm	and is filed under Blog. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.